Iray amin'ny zava-tsarin'i Louvre: ny fandresen'ny elatra an'ny Samothrace | Famoronana an-tserasera
El Louvre dia iray amin'ireo tranombakoka malaza indrindra eto an-tany ary izay misy ny iray amin'ireo fanangonana zavakanto tena mampino. Miresaka tranombakoka iray izahay fa afaka mahita ny Mona Lisa sy ny galeriana iray an'i Michelangelo ianao ao amin'ny lalantsarany.
Tsy manadino ny Venus de Milo ary sary sokitra hafahafa ho an'ny antsipiriany iray: ny fandresen'i Samothrace manana elatra. Mahagaga fa tsy hita ny iray amin'ny sandriny. Izy io dia iray amin'ireo sangan'asa ananan'ny Louvre ary tsy fantatry ny maro ny tantarany.
Ny fandresen'ny elatra Samothrace dia tsy fantatra ny fiaviany, na dia lazain'ny Louvre aza sombin-kazo sokitra nataon'ny mponin'i Rhodes, nosy grika, tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX tal. Izy io dia noforonina tamin'ny fotoana tena lehibe indrindra tamin'ny vanim-potoana Hellenista.
Este niverina ny hetsika zava-kanto taloha manoloana ny sary sokitra an-tsehatra an-tsehatra momba ny angano mihetsika. Ny sary sokitra dia maneho ny andriamanitry ny fandresena, Nike.
Ny fandresen'ny Winged Victory an'ny sary sokitra Samothrace dia inoana fa noforonina ho fahatsiarovana ny fandresena amin'ny ady an-dranomasina. Indrindra fa noho io tongotra mandroso io sy ny paozin'ilay sarivongana. Sarivongana iray amin'ireo singa marbra izay nandravaka ny Toeramasin'ireo Andriamanitra Lehibe an'i Samothrace. Ary natokana ho an'ny fivavahana tsy fantatra, na sekta miafina an'ny Reny Lehibe.
Ilay diplaomaty frantsay no nahita an'io ary Charles Campoiseau, mpikaroka arkeology, tamin'ny aprily 1863. Ary raha vitany ny namerina ireo vato 23 izay mandrafitra ny sambo, dia entina any Paris ilay tarehimarika satria hitany niaraka tamin'ny sanganasany 3.
Ny mampihomehy dia izay tamin'ny taona 90 Taorian'ny nahitana azy, ireo arkeology avy any Aotrisy dia nahita sombin-javatra tsy hita, anisan'izany ny tanany ankavanana, na dia mbola tsy fantatra intsony aza ny tànany havia toy ny ahitantsika azy ankehitriny.
Izahay dia mamela anao amin'ny sarivongana azo tanterahina an'ity mpanakanto maoderina ity izay azo antoka fa hahagaga anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny sary sokitra tsy misy sandry ny Louvre
Ireo tanàna be mpitady indrindra amin'ny zavaboary